ပိုကျဆံပွတျနခြေိနျမှာ သငျ့ကောငျမလေးနဲ့အတူ ပြျောရှငျစရာတှေ ဖနျတီးနိုငျမယျ့ အခကျြ ၁၂ ခကျြ
HomeLoveပိုကျဆံပွတျနခြေိနျမှာ သငျ့ကောငျမလေးနဲ့အတူ ပြျောရှငျစရာတှေ ဖနျတီးနိုငျမယျ့ အခကျြ ၁၂ ခကျြ
H July 17, 2021
ပိုကျဆံမရှိရငျ ပြျောရှငျမှုကို ဝယျလို့မရဘူးလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ ပိုကျဆံသာရှိရငျ သငျ့ကောငျမလေးကို တနျဖိုးကွီး လကျဆောငျတှနေဲ့ ဖူးဖူးမှုတျထားလို့ ရပါတယျ။ အားလပျရကျတှမှောလညျး ပြျောပြျောပါးပါး လညျပတျလို့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ တဈခါတလေ သငျ့အိတျကပျထဲမှာ ပိုကျဆံလုံးဝမရှိတဲ့ အခြိနျဆိုတာလညျး ရှိပါတယျ။ ပိုကျဆံမကုနျဘဲနဲ့လညျး သငျ့ကောငျမလေးနဲ့ ဒီလိုပြျောရှငျစရာလေးတှေ ဖနျတီးလို့ရပါတယျနျော။
1. သူမအတှကျ ဟငျးခကျြပေးပါ။
မီးဖိုခနျးထဲမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှနေဲ့ အကောငျးဆုံးဟငျးကို ခဏတာအတှငျး ခကျြလို့ရပါတယျ။ သငျခကျြတတျတဲ့ဟငျးကို လကျစှမျးပွပါ။ သငျခကျြတဲ့ဟငျးက သူမအတှကျ အရသာရှိစပွေီး ပြျောရှငျစမှောပါ။
2. DVD ခှေ ကွညျ့ပါ။
ရုပျရှငျကွညျ့ဖို့မတတျနိုငျ ဒီအခကျြကို မမပေ့ါနဲ့။ သငျတို့နှဈယောကျလုံး ရုပျရှငျကို အကွိမျတဈရာမက ကွညျ့ဖူးကွပါလိမျ့မယျ။ DVD ခှတှေေ ကွညျ့ပွီး ပြျောရှငျစရာ အမှတျတရတှဆေီကို အလညျပွနျသှားပါ။ သငျသဘောကတြဲ့ ဇာတျဝငျခနျးတှေ၊ သငျတို့နှဈယောကျနဲ့ တိုကျဆိုငျတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးတှေ အကွောငျး ပွောပါ။
ဓာတျဆီထညျ့ဖို့ ငှမေလုံမလောကျဖွဈနတောလား။ မပူပါနဲ့။ သငျ့ကောငျမလေးကို ချေါပွီး လမျးလြှောကျထှကျပါ။ ရှုပျယှကျခတျနတေဲ့ လမျးပျေါမှာ လမျးလြှောကျတာထကျ လညေငျးတှေ တိုကျခတျနတေဲ့၊ အေးခမျြးတဲ့ ကမျးခွမှော လမျးလြှောကျတာ ပိုကောငျးပါတယျ။ ရောကျတတျရာရာ စကားတှကေိုလညျး ပွောပါ။ အရေးကွီးတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေိုလညျး ဆှေးနှေးပါ။ ဟာသတှပွေောပွီး လတျဆတျတဲ့လကေို ရှုရှိုကျပါ။
4. စကားလုံးပဟဠေိတှကေို အတူတူဆော့ပါ။
စကားလုံးပဟဠေိတှကေို အတူတူဆော့တဲ့အခြိနျဟာ နှေးထှေးမှုတှေ ဝမြှေနိုငျတဲ့အခြိနျပါပဲ။ သငျ့ကောငျမလေး အပျေါမှာထားတဲ့ သငျ့ရဲ့ခံစားခကျြတှကေို စကားလုံးဆကျတဲ့နညျးနဲ့ ဖျောပွရငျး ပြျောရှငျအောငျ လုပျပေးလို့ရပါတယျ။
5. ကွညျနူးဖှယျ သီခငျြးလေးတှကေို နားထောငျပါ။
သူမ နှဈသကျတဲ့ သီခငျြးလေးတှကေို အတူတူနားထောငျပါ။ ပွီးတော့ သငျနဲ့အတူ စုံတှဲအက ကဖို့ ပွောပါ။ အကနဲ့ နူးညံ့တဲ့ဂီတကို ပေါငျးစပျလိုကျတဲ့အခါ သငျတို့ဟာ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ပိုပွီးရငျးနှီး ခဈြခငျသှားပါလိမျ့မယျ။ ကနတေဲ့အခြိနျမှာ ပြျောရှငျစရာ အမှတျတရလေးတှကေို အပွနျအလှနျပွောပါ။
6. အနာဂတျ ဘဝအကွောငျး ဆှေးနှေးပါ။
သငျတို့ရဲ့အခဈြရေးအကွောငျးကို ဆှေးနှေးပါ။ အနာဂတျ အစီအစဉျတှနေဲ့ သငျဖွဈခငျြတဲ့ အရာတှကေို တိုငျပငျပါ။ သငျက အနာဂတျအတှကျ အလေးအနကျထားပွီး ပွောဆိုတဲ့အခါ သငျ့ကောငျမလေးက သိပျကို ကနြေပျပြျောရှငျပါလိမျ့မယျ။
7. အိမျကို အလှဆငျပါ။
ပစ်စညျးပေါကျစနလေးတှကေို စုဆောငျးထားပါ။ ဒီပစ်စညျးတှကေ အိမျကို အလှဆငျတဲ့အခါ အထောကျအကူဖွဈမှာပါ။ လိုကျကာတှကေို လဲလိုကျပါ။ ဓာတျပုံမှနျဘောငျတှကေို နရောပွောငျးပွီး ဗီရိုကို ရှငျးပါ။ သငျအလှဆငျထားတာကို သငျ့ကောငျမလေးက သဘောကပြွီး တနျဖိုးထားမှာပါ။
ထူးခွားပွီး စိတျကူးယဉျလို့ကောငျးတဲ့ အခဈြဝတ်ထုတှကေို သငျကနှဈသကျပွီး သငျ့ကောငျမလေးကိုလညျး ဒီစာအုပျတှေ ဖတျဖို့ အကွံပေးခငျြပါသလား။ သူမကို ဘာလို့မဖတျပွနိုငျရမှာလဲ။ စကျရုပျကွီးလိုတော့ မဖတျပွပါနဲ့။ ခံစားခကျြတှေ၊ အမူအရာတှနေဲ့ အသကျသှငျးပွီး ဖတျပွပါ။ ပွီးတော့ စာအုပျပျေါမှာထားတဲ့ သငျ့ရဲ့အမွငျကိုလညျး ဝမြှေပါ။
9. Video game တှေ ကစားပါ။
သငျ့ကောငျမလေးက Video game တှေ ကစားရတာ သဘောကခငျြမှ ကပြါလိမျ့မယျ။ ပထမဆုံးအကွိမျ ဆိုရငျတော့ သူမလညျး ငွငျးမှာ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့ကောငျမလေးကွိုကျလောကျမယျ့ ဂိမျးတဈခုကို ဖှငျ့လိုကျပါ။ ဂိမျးအကွောငျးကို ရှငျးပွပါ။ ဂိမျးဆော့တဲ့နရောမှာတော့ သငျဟာ ခနျြပီယံပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူမက အခုမှ စကစားတာဆိုတော့ သငျက အရှုံးပေးခွငျးဖွငျ့ သူမအပျေါ လူကွီးလူကောငျး ပီသလိုကျပါ။ ဂိမျးဆော့လို့ နိုငျလာရငျ ပိုပွီးစိတျဝငျစားလာပါလိမျ့မယျ။
10. သူမကို နှိပျပေးပါ။
သူမရဲ့ခန်ဓာကိုယျကို ညငျညငျသာသာ နှိပျနယျပေးပါ။ သဘောကလြား၊ မကဘြူးလားဆိုတာလညျး မေးလိုကျပါ။ သူမဘကျက အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျ ဆကျမနှိပျပါနဲ့။ နှိပျနတေဲ့အခြိနျမှာ စကားတှပွေောနလေိုကျပါ။
11. ဈေးမဝယျဘဲ ပစ်စညျးတှကေို လြှောကျကွညျ့ပါ။
အနီးဆုံး ဈေးဝယျစငျတာတှကေို သှားပွီး အဝတျအစားတှေ၊ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှေ၊ စားစရာတှကေို မကျြစိအစာကြှေးပါ။ သငျ့ကောငျမလေးကို ဝယျခငျြတဲ့ပစ်စညျးတှေ စာရငျးလုပျထားဖို့ ပွောပါ။ နောကျပွီး သငျ့လကျထဲမှာ ပိုကျဆံရှိလာတာနဲ့ သူမ လိုခငျြတဲ့ပစ်စညျးတှေ ဝယျပေးမယျလို့ ကတိပေးလိုကျပါ။
ကျောဖီဖြျောတာ လှယျကူပါတယျ။ ဘာလို့ ကျောဖီ မဖြျောပေးနိုငျရမှာလဲနျော။ သငျ့ကောငျမလေးကို ကျောဖီသောကျမလားလို့ မေးလိုကျပါ။ သူမ လာကူညီပါလိမျ့မယျ။ တဈယောကျတဈငုံစီ ခှကျလဲသောကျပါ။ ဘယျလောကျတောငျ သာယာလိုကျမလဲ။
သငျ့ခဈြသူဟာ အရမျး မပူဆာတတျဘူးဆိုရငျ၊ သငျ့အခွအေနကေို နားလညျပေးတတျသူဆိုရငျ သငျဟာ ကံကောငျးပါတယျ။ အရိုးရှငျးဆုံးအရာတှေ လုပျပေးမယျဆိုရငျ သူမက ကနြေပျပြျောရှငျနဦေးမှာပါပဲ။ သငျ့လကျထဲမှာ ငှခေဏလေး ပွတျတောကျနတောကို စိတျမကောငျးမဖွဈပါနဲ့။ ဒီလို ခဈြစရာကောငျးတဲ့အရာတှေ၊ ရငျခုနျစရာကောငျးတဲ့အရာတှကေ ပြျောစရာအမှတျတရအဖွဈ ကနျြရဈခဲ့မှာပါ။
ပိုက်ဆံပြတ်နေချိန်မှာ သင့်ကောင်မလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာတွေ ဖန်တီးနိုင်မယ့် အချက် ၁၂ ချက်
ပိုက်ဆံမရှိရင် ပျော်ရွှင်မှုကို ဝယ်လို့မရဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံသာရှိရင် သင့်ကောင်မလေးကို တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်တွေနဲ့ ဖူးဖူးမှုတ်ထားလို့ ရပါတယ်။ အားလပ်ရက်တွေမှာလည်း ပျော်ပျော်ပါးပါး လည်ပတ်လို့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေ သင့်အိတ်ကပ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလုံးဝမရှိတဲ့ အချိန်ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲနဲ့လည်း သင့်ကောင်မလေးနဲ့ ဒီလိုပျော်ရွှင်စရာလေးတွေ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်နော်။
1. သူမအတွက် ဟင်းချက်ပေးပါ။
မီးဖိုခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးဟင်းကို ခဏတာအတွင်း ချက်လို့ရပါတယ်။ သင်ချက်တတ်တဲ့ဟင်းကို လက်စွမ်းပြပါ။ သင်ချက်တဲ့ဟင်းက သူမအတွက် အရသာရှိစေပြီး ပျော်ရွှင်စေမှာပါ။
2. DVD ခွေ ကြည့်ပါ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့မတတ်နိုင် ဒီအချက်ကို မမေ့ပါနဲ့။ သင်တို့နှစ်ယောက်လုံး ရုပ်ရှင်ကို အကြိမ်တစ်ရာမက ကြည့်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ DVD ခွေတွေ ကြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရတွေဆီကို အလည်ပြန်သွားပါ။ သင်သဘောကျတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ သင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ အကြောင်း ပြောပါ။
ဓာတ်ဆီထည့်ဖို့ ငွေမလုံမလောက်ဖြစ်နေတာလား။ မပူပါနဲ့။ သင့်ကောင်မလေးကို ခေါ်ပြီး လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ။ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်တာထက် လေညင်းတွေ တိုက်ခတ်နေတဲ့၊ အေးချမ်းတဲ့ ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ရောက်တတ်ရာရာ စကားတွေကိုလည်း ပြောပါ။ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးပါ။ ဟာသတွေပြောပြီး လတ်ဆတ်တဲ့လေကို ရှုရှိုက်ပါ။
4. စကားလုံးပဟေဠိတွေကို အတူတူဆော့ပါ။
စကားလုံးပဟေဠိတွေကို အတူတူဆော့တဲ့အချိန်ဟာ နွေးထွေးမှုတွေ ဝေမျှနိုင်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ သင့်ကောင်မလေး အပေါ်မှာထားတဲ့ သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို စကားလုံးဆက်တဲ့နည်းနဲ့ ဖော်ပြရင်း ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
5. ကြည်နူးဖွယ် သီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ပါ။
သူမ နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို အတူတူနားထောင်ပါ။ ပြီးတော့ သင်နဲ့အတူ စုံတွဲအက ကဖို့ ပြောပါ။ အကနဲ့ နူးညံ့တဲ့ဂီတကို ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ သင်တို့ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုပြီးရင်းနှီး ချစ်ခင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကနေတဲ့အချိန်မှာ ပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရလေးတွေကို အပြန်အလှန်ပြောပါ။
6. အနာဂတ် ဘဝအကြောင်း ဆွေးနွေးပါ။
သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးအကြောင်းကို ဆွေးနွေးပါ။ အနာဂတ် အစီအစဉ်တွေနဲ့ သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို တိုင်ပင်ပါ။ သင်က အနာဂတ်အတွက် အလေးအနက်ထားပြီး ပြောဆိုတဲ့အခါ သင့်ကောင်မလေးက သိပ်ကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်။
7. အိမ်ကို အလှဆင်ပါ။
ပစ္စည်းပေါက်စနလေးတွေကို စုဆောင်းထားပါ။ ဒီပစ္စည်းတွေက အိမ်ကို အလှဆင်တဲ့အခါ အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ လိုက်ကာတွေကို လဲလိုက်ပါ။ ဓာတ်ပုံမှန်ဘောင်တွေကို နေရာပြောင်းပြီး ဗီရိုကို ရှင်းပါ။ သင်အလှဆင်ထားတာကို သင့်ကောင်မလေးက သဘောကျပြီး တန်ဖိုးထားမှာပါ။
ထူးခြားပြီး စိတ်ကူးယဉ်လို့ကောင်းတဲ့ အချစ်ဝတ္ထုတွေကို သင်ကနှစ်သက်ပြီး သင့်ကောင်မလေးကိုလည်း ဒီစာအုပ်တွေ ဖတ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါသလား။ သူမကို ဘာလို့မဖတ်ပြနိုင်ရမှာလဲ။ စက်ရုပ်ကြီးလိုတော့ မဖတ်ပြပါနဲ့။ ခံစားချက်တွေ၊ အမူအရာတွေနဲ့ အသက်သွင်းပြီး ဖတ်ပြပါ။ ပြီးတော့ စာအုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့ သင့်ရဲ့အမြင်ကိုလည်း ဝေမျှပါ။
9. Video game တွေ ကစားပါ။
သင့်ကောင်မလေးက Video game တွေ ကစားရတာ သဘောကချင်မှ ကျပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆိုရင်တော့ သူမလည်း ငြင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကောင်မလေးကြိုက်လောက်မယ့် ဂိမ်းတစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဂိမ်းအကြောင်းကို ရှင်းပြပါ။ ဂိမ်းဆော့တဲ့နေရာမှာတော့ သင်ဟာ ချန်ပီယံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူမက အခုမှ စကစားတာဆိုတော့ သင်က အရှုံးပေးခြင်းဖြင့် သူမအပေါ် လူကြီးလူကောင်း ပီသလိုက်ပါ။ ဂိမ်းဆော့လို့ နိုင်လာရင် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ်။
10. သူမကို နှိပ်ပေးပါ။
သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ညင်ညင်သာသာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ သဘောကျလား၊ မကျဘူးလားဆိုတာလည်း မေးလိုက်ပါ။ သူမဘက်က အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ဆက်မနှိပ်ပါနဲ့။ နှိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ စကားတွေပြောနေလိုက်ပါ။
11. ဈေးမဝယ်ဘဲ ပစ္စည်းတွေကို လျှောက်ကြည့်ပါ။
အနီးဆုံး ဈေးဝယ်စင်တာတွေကို သွားပြီး အဝတ်အစားတွေ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊ စားစရာတွေကို မျက်စိအစာကျွေးပါ။ သင့်ကောင်မလေးကို ဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ စာရင်းလုပ်ထားဖို့ ပြောပါ။ နောက်ပြီး သင့်လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိလာတာနဲ့ သူမ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်ပါ။
ကော်ဖီဖျော်တာ လွယ်ကူပါတယ်။ ဘာလို့ ကော်ဖီ မဖျော်ပေးနိုင်ရမှာလဲနော်။ သင့်ကောင်မလေးကို ကော်ဖီသောက်မလားလို့ မေးလိုက်ပါ။ သူမ လာကူညီပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်တစ်ငုံစီ ခွက်လဲသောက်ပါ။ ဘယ်လောက်တောင် သာယာလိုက်မလဲ။
သင့်ချစ်သူဟာ အရမ်း မပူဆာတတ်ဘူးဆိုရင်၊ သင့်အခြေအနေကို နားလည်ပေးတတ်သူဆိုရင် သင်ဟာ ကံကောင်းပါတယ်။ အရိုးရှင်းဆုံးအရာတွေ လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် သူမက ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေဦးမှာပါပဲ။ သင့်လက်ထဲမှာ ငွေခဏလေး ပြတ်တောက်နေတာကို စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။ ဒီလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေ၊ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေက ပျော်စရာအမှတ်တရအဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါ။